Wararka Maanta: Arbaco, Jan 9 , 2013-Ciidammo ka kala tirsan Dowladda Soomaaliya iyo Ahlusunna Waljamaaca oo Daweyn loogu qaaday dalka Itoobiya
Sidoo kale, waxaa iyagana laga dhoofiyay shalay magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo askari Itoobiyaan ah oo ku dhaawacmay dagaalka oo ahaa mid culus oo Al-shabaab iyo ciidamada dowladda, Ahlusunna iyo kuwa Itoobiya ku dhexmaray deegaano u dhexeeya degmooyinka Garbahaarey iyo Luuq.
Afhayeenka xoogagga Ahlusunna ee Koonfurta Soomaaliya, Sheekh Max’ed Xuseen (Al-Qaaddi) ayaa warbaahinta u sheegay isagoo ku sugan xarunta gobolka Gedo in askartan oo lix ah ay dhaawacyo culus kasoo gaareen dagaallo Al-shabaab ay kula galeen inta u dhexeysa degmooyinka Luuq iyo Garbahaareey.
“Rajo weyn ayaan ka qabnaa in askartan daweyntooda lagu guuleysto, maadama ay dhaawacyadoodu yihiin kuwo aad u daran, ayna dib ugu soo laabtaan howlahooda,” ayuu yiri Al-Qaaddi.
Maalimihii Sabtidii iyo Axaddii toddobaadkan ayaa waxaa deegaanno u dhexeeya degmooyinka Garbahaarey iyo Luuq ka dhacay dagaallo culus oo ay ku dhinteen dad ka badan 50-qof oo labada dhinac, iyadoo aan la ogeyn khasaarah rasmiga ah ee kasoo gaaray ciidamada Itoobiya.
Inkastoo aysan ahayn markii dalka dibaddiisa daweyn loogu qaado askarta ku dhaawacma dagaallada ay dowladdu kula jirto Al-shabaab ayaa haddana waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo askar Soomaaliyeed daweyn loogu qaado dalka Itoobiya oo ay ciidammo kaga sugan yihiin Soomaaliya.
Dhanka kale, ciidamada Itoobiya ayaa difaacyo ka sameystay gudaha iyo daafaha degmada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo, iyadoo saraakiisha dowladda iyo kuw Ahlusunna ay sheegeen inay ku wajahan yihiin laba degmo oo ay Al-shabaab kaga sugan tahay gobolka Gedo.